Barbecue Grill waya pajira riya
Disposable kutenderera Grill pajira riya
Disposable Square Grill pajira riya
Disposable rectangle Grill pajira riya
Mazimbe grill mesh
BBQ shopu grill mesh
Yakachipa grill mesh
Kunze kwekambi grill grill
Stainless simbi Grill pajira riya
Bhengi shopu grill mesh
Marasha Grill Mesh
Disposable rectangle bvunzurudza ...
Yakatenderera grill waya pajira riya
Disposable grill mesh inonziwo yakavharwa kumucheto grilling mesh, iyo inogona kudzivirira kuitika kwemaoko kukwenya.
Isu takanga tave nenyanzvi muBarbecue grill mambure inogadzira uye yekurasira kubvira 2005 gore. Kubuda kwezuva nezuva zvidimbu mazana matatu. Kambani yedu yanga iri yemumwe wevatengesi vepamusoro veBBQ mesh kuAnping county, iripi tambo yemataipi.
Iine mukana wekuchengetedza mutengo wemabasa kushambidza uye yakaderera chigadzirwa mutengo, Iyo inogona kuraswa bhengi grill mambure inogamuchirwa kwazvo ne bhengi shopu. Fekitori yedu yakanga iine hunyanzvi hwekurasa bhengi mesh yekugadzira uye kutumira kunze kweanopfuura makore gumi nemashanu. Izvo zvigadzirwa 'zvemhando uye zvinokodzera mushure-sevhisi zvese zvinowana mukurumbira wakakwirira mumusika. Izvo zvinokurudzirwa zvigadzirwa ruzivo: Round grill mesh-Flat mhando Wire dhayamita 0.85mm Mesh 11mm Saizi 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 263mm ...
Iyo yemarasha grill mesh anoshandiswa zvakanyanya mumabhengi mashopu, muresitorendi, pikiniki uye musasa wekunze kwebhayiki yenyama nehove. Mazimbe akanaka ndiwo akakosha pakunakirwa nemabharuki emarasha, anogona kupisa nguva yakareba uye moto wakasimba. Kana uchigocha, uchitsiva yako mesh grill, iwo marasha anopisa anopfungaira iyo nyama nekunakisisa kuravira. Saizi yakakurumbira yemarasha grill mesh Disposable round grill mesh-Flat type Wire diameter 0.85mm Mesh 11mm Size 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, ...
Yakachipa grill mambure zvakare zvinoreva kuraswa bhaa mesh, ayo akagadzirwa kwakakurudzira simbi waya. Yakafukidzwa pamucheto yekucheka mesh yaigona kudzivirira kuitika kwemaoko kukwenya. Inoshandiswa zvakanyanya muJapan neKorea bhengi zvitoro, izvo zvinogona kuchengetedza basa rekuwachisa uye hupfumi hwekutsiva. Grill mesh yaigona kuchengetedza chikafu chako pane iyo grill uye kwete kudonha pasi uye inobvumira zvakaenzana zvakagochwa chikafu nguva dzese. Marasha anopisa anoita nyama izere nekunhuwirira kweMarasha. Maitiro ekugadzira: Nhanho yekutanga: Waya ...
Disposable round BBQ grill mesh inonziwo yakafukidzwa kumucheto grilling mesh, iyo inogona kudzivirira kuitika kwemaoko kukwenya.
Isu takanga tave nenyanzvi muBarbecue grill mambure inogadzira uye yekurasira kubvira 2005 gore. Kubuda kwezuva nezuva zvidimbu mazana matatu. Kambani yedu yakange iri yemumwe wevatengesi vepamusoro veBQQ waya mesh kuAnping County, iko kupi iko mesh dhorobha.
Yedu yeJapan grill mesh inonzi zvakare Japan inoraswa grill mesh. Disposable grill mesh anoshandiswa zvakanyanya kune marasha BBQ, senge chiJapan grill Hibachi, chiJapan BBQ chitoro chemazimbe ovhoni. Iyo inoraswa Barbecue waya mesh ine hunhu hwemutengo wakaderera, hapana chikonzero chekugeza, kuchengetedza basa, kurema uremu uye nyore kutakura yenyuchi. Yakakurumbira saizi inokurudzirwa: Round grill mesh-Flat mhando Wire dhayamita 0.85mm Mesh 11mm, 12mm Saizi 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 26 ...
Korea Grill pajira riya chakagadzirwa kwakakurudzira simbi waya, izvo zvinonzi kuraswa Grill waya pajira riya uye Stainless simbi Grill pajira riya, izvo zvinogona kudzokororwa kushandisa. Iyo inorasirwa grill mesh yakachipa pane isina simbi grill mesh uye kuchengetedza basa rekuwachisa. Saizi inozivikanwa senge pazasi: Round grill waya mesh- Convex mhando Wire dhayamita 0.8mm, 0.85mm Mesh 11mm, 11.5mm Saizi 330mm, 300mm, 295mm, 280mm, 270mm, 260mm, 245mm, 240mm, 230mm Round Grill waya waya pajira riya- ARC mhando Waya dhayamita 0.85m ...
panze musasa Grill pajira riya
Iyo yekunze musasa grill mesh yakasimba uye inodzokorora kuti ishandiswe. Material kwakakurudzira simbi waya, Stainless simbi 304 mugiredhi Good. (hapana ngura, nyore kuchenesa) Saizi 430 * 340mm, 400 * 250mm, 560 * 410mm, 395 * 240mm (bvuma kuti zviitwe) Wire dhayamita 1.0mm, 2.5mm, 3.0mm Dhayamita dhayamita 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm Gadzira moto une marasha ndokuuisa muvira. Iyo grill mesh pavira ichaita chikafu zvakaenzana bhengi. Isu iye zvino tine imwe yepamusoro michina yekugadzira, ...
KeroKumabvazuva kweLin Zhang, Anping County, Hengshui Guta, Hebei Province, China